Fahasamihafana eo amin'ny pollen sy ny nectar | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny pollen sy ny nectar | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Siansa & Natiora / Siansa / Biolojia / Fahasamihafana eo amin'ny Pollen sy ny Nectar
Fahasamihafana eo amin'ny Pollen sy Nectar
29 Desambra 2011 Narotsak'i HAW
Pollen vs Nectar
Ny voninkazo dia fitifirana manan-talenta manokana. Ny voninkazo mahazatra dia misy vorondolo 4, isaky ny iray hafa, eo amin'ny tahony. Mety ho lava na lava ny tahony. Ireo mpangalatra roa ambany dia tsy tafiditra mivantana amin'ny fiterahana. Noho izany dia nantsoina hoe whorls fanampiny izy ireo. Ny sifotra roa ambony dia tafiditra mivantana amin'ny fiterahana. Noho izany dia nantsoina hoe whorls miteraka izy ireo. Ny whorl reproductive dia misy microsporophylls sy megasporophylls. Ny microsporophylls dia antsoina hoe stamens ary megasporophylls dia antsoina hoe carpels amin'ny anthophytes / angiosperms. Ny voninkazo sasany dia samy manana stamens sy carpels amin'ny voninkazo iray ihany ary ny voninkazo sasany dia manana carpels na stamens. Ny whorl fahatelo dia fantatra amin'ny anarana hoe androecium, izay ny lehilahy. Whorl fahefatra dia fantatra amin'ny anarana hoe gynoecium, izay faritra vavy amin'ny voninkazo. Ny firafitry ny fiterahana dia miteraka megaspores sy microspores na vovobony. Fomba lehibe hanaparitahana mikrospora na vovobony amin'ny alàlan'ny bibikely. Mba hisarihana bibikely dia tena ilaina ny mamimbony.
Ny spore lahy dia antsoina hoe microspores. Ny spores micro dia antsoina koa hoe voamadinika. Ao amin'ny zavamaniry voninkazo dia misy mikrospora ao anaty sac polen na microsporangium. Ny mikrospora dia rafitra bitika kely sy minitra. Saika toy ny vovoka izy ireo. Ny microspore tsirairay dia manana sela iray sy palitao roa. Palitao ivelany dia ny extine, ary ny ao anatiny no intine. Extine dia sosona henjana sy tapaka. Matetika izy io dia misy valiny maniry. Indraindray dia mety ho malama ihany koa. Malama ny ao anatiny ary manify be. Ny cellulose no tena anaovana azy. Ilay extine dia misy toerana manify iray na maromaro fantatra amin'ny hoe pores germes izay ivoahan'ny masirasira mba hamorona fantsona vovobony. Ny fantsona vovobony dia mihalava amin'ny vatan'ny gynoecium izay mitondra gamet roa lahy ao. Mihombo ny fantsona vovobony ary miditra amin'ny ovule amin'ny alàlan'ny micropyle. Avy eo, ny fara tampon'ny fantsom-pandrefesana vovobony sy ireo atiny roa lahy dia alefa ao amin'ny ova. Ny fampiraisana indroa dia amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny vatan'ny lahy tokana miaraka amin'ny atin'ny sela atody, izay miteraka zégote diploid sy fampifangaroana ny vatan-dehilahy hafa miaraka amin'ny atiny faharoa atin'ny diploid, izay manome ny atin'ny endosperma voalohany.
Nectar dia tsiambaratelo ilaina amin'ny fihary na taova manokana antsoina hoe nectarines ny voninkazo. Ireo nectarines dia hita eo amin'ny voninkazo sy ny zavamaniry. Ny nectarines voninkazo dia hita amin'ny toerana samihafa amin'ny voninkazo. Hita ao amin'ny épermermis ny vatan'ny miafina miafina. Ireo sela mpitan-tsoratra dia manana cytoplasma matevina tokoa. Izy ireo dia mety ho sela lava toy ny sela palisade. Ny nectar dia rakotra cuticle. Ny vaskola dia mifamatotra akaiky amin'ny nectarines. Ny siramamy avy amin'ny nectarines dia avy amin'ny phloem. Ny nectar dia azo esorina amin'ny alàlan'ny rindrin'ny sela sy ny cuticle vaky na indraindray amin'ny alàlan'ny stomata.
Inona no mahasamihafa ny Pollen sy Nectar?
• Ny vovobony dia sela haploid, ary ny zana-kazo dia zoro ataon'ny sela fotsiny.
• Ny vovobony dia voarohirohy amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo, fa ny nectar kosa tsy tafiditra amin'ny fiterahana.
• Ny vovobony dia miforona avy amin'ny sela renin'ny mikrospore ary ny manafina dia miafina avy amin'ny tsiambaratelo miafina ao amin'ny mamony.
Fahasamihafana eo amin'ny spore sy ny voa Fahasamihafana eo amin'ireo parakeets sy Lorikeets Fahasamihafana eo amin'ny Ovary sy ny Ovule Fahasamihafana eo amin'i Carpel sy Pistil Fahasamihafana eo amin'ny tracheide sy ny sambo
Filed Under: Biology Tagged With: microspore , microspores , nectar , Nectarines , pollen , grains pollen , reproductive whorl , whorls
Momba ny mpanoratra: HAW
Fahasamihafana eo amin'ny bakteria sy ny cyanobacteria
Fahasamihafana eo amin'ny Motorola Photon 4G sy HTC Evo Design 4G
Fahasamihafana eo amin'ny SCADA sy ny HMI
Fahasamihafana eo amin'ny Fedora sy Trilby
Fahasamihafana eo amin'ny fahitalavitra Samsung Series 8 sy Series 9